“Horta Gaadmo iskumaynu ogayne waad i gaadeen, Warkiin-na waan la Socday”-Saleebaan-Gaal oo Ka Qosliyay Dadkii soo Dhaweeyay | hubaalnewspaper
“Horta Gaadmo iskumaynu ogayne waad i gaadeen, Warkiin-na waan la Socday”-Saleebaan-Gaal oo Ka Qosliyay Dadkii soo Dhaweeyay
“Waxaan rajaynayaa in Arrintaasi (Wada-hadallada) ay soo dhawayso Ictiraafkii, Hadday doonaan waxba yaanay ina siinine”
Hargeysa ( Hubaal) – Guddoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa wada-hadalladii dhexmaray madaxweynaha Dawladda Somaliland iyo dhiggiisa maamulka ku meelgaadhka ah ee Soomaaliya ku sifeeyay mid meesha ka saaray cabsi laga qabay shirar qaranimadeena khuseeya oo ay Somaliland hor fadhiisato Soomaaliya.
Gudoomiyaha Golaha Guurtida oo shalay Saxaafadda ugu Warramay Madaarka Berbera, waxyar ka dib markii uu ka soo laabtay Socdaal Caafimaad oo uu muddo laba sannao ah ugu maqnaa wadanka Ingiriiska, waxa uu sheegay in muddadii uu maqnaa aanu war ku seeganayn dalka iyo marxalada uu marayo, xukuumadda iyo golayaasha kala duwan ee qarankuna si wanaagsan u wadaan geediga dawladnimo.
Saleebaan-Gaal waxa uu u mahad celiyay dadkii soo dhaweeyay isaga oo si kaftan ah hadalkiisa ku bilaabay weedho uu ku cabirayo masuuliyiinta madax iyo minjo leh ee soo dhaweeyay iyo qaabka loo soo agaasimay soo dhawayntiisaba “Horta Salaamu calaykum, gaadmo-na iskumaynu ogayn waad i gaadeene,” ayuu yidhi guddoomiyuhu waxaanu intaa ku daray “Guurtidii oo dhan, dawladdii, duqii magaalada (Berbera) iyo kii gobolkaba, xildhibaano kale iyo odayaashiiba. warkiina waan la socday”.
Guddoomiyaha Guurtida waxa uu dareen yididiilo leh ka muujiyey Siyaasadda ay xukuumaddu ku hoggaamiso dalka iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa golayaasha “dalkii iyo dadkiiba waa wanaagsan yahay waxaanan ilaahay ka rajaynayaa in sidaa aydun maanta u wadaan u wada wadno”. Ayuu yidhi
Md. Saleebaan-gaal, waxa uu soo dhaweeyay wada hadallada hordhaca ah ee u bilaabmay Somaliland iyo Soomaaliya. “Goleyaal aynu ka baqi jirnayna waynu ka qeyb-galnay. Waxaan rajaynayaa inay soo dhawayso arrintaasi ictiraafkii oo bal maruun aynu hor fadhiisano golayaasha (Caalamka) waxba yaanay ina siinin hadday doonaane”. Ayuu yidhi Guddoomiyaha golaha guurtidu md. Saleebaan Maxamuud Aadan (Saleebaan-Gaal).
← Dhokumenti Fashiliyay Dhaqaale Dhexmaray Guddoomiyaha Wakiillada Somaliland iyo Guddoomiyaha Bangiga Djibouti
UCID Vs Abaaraha: Waxaa halaag iyo dhib u sugnaatay, kuwa xoolaha Ummadda sida fudud u qaadanaya, If iyo Aakhirana ma liibaani doonaan →